Iindonga zokwehliswa kweengubo abavelisi kunye nabanikezeli - China iiziseko zeedumbulu zentengiso yeFektri
I-Rubber Hex dumbbells zithiywe ngamagama ezinto zazo kunye nemilo eyahlukileyo. Enkosi kumacala abo amaninzi, abayi kujikeleza enye ibekwe phantsi. Olu luncedo olukhulu ukuba uyatshintsha phakathi kobunzima okanye imithambo kwaye uhlala ubachola kwaye ubabeka phantsi. Ziye zigqwesile kwiisekethe ezisemgangathweni, ezinje nge-dumbbell push-ups ngenxa yozinzo olongezelelekileyo.
I-hex rubber dumbbell iza ngexabiso eliphantsi kunerabha esemgangathweni okanye i-urethane dumbbell eyenza ukuba ibe lukhetho olukhulu kuhlahlo-lwabiwo mali. Ukongeza, izinto ezenziwa lula ukuba zigcinwe ukuba ufuna ukutyala imali kwi-rack.